Ukuhlola iWebinar (Septhemba 14, 2020) - Inhlangano Yezikhungo Zokubhala Zakwamanye Amazwe
September 10, 2020 Elizabeth Ukukhangisa
Ngabe ukuhlolwa kungaphandle kwendlu yakho ejwayelekile yamasondo? Ngabe kubonakala kungumsebenzi omningi kakhulu? Ingabe uyazibuza ukuthi kungani ezinye izinhlelo zifuna ukugunyazwa kwabafundisi bazo? Uma okunye kwalokhu kujwayelekile, sikukhuthaza ukuthi ucule ngoMsombuluko, Septhemba 14 lapho uJennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies, noShareen Grogan behlinzeka ngezibonelo eziningiliziwe zalokho abakwenzayo ezikhungweni zabo zokubhala. Maka ikhalenda lakho lesikhathi sakho bese ujoyina nathi!
11 ekuseni Pacific
12 PM Intaba
1 PM Maphakathi
2 PM EMpumalanga
Wonke amalungu e-IWCA amukelekile ukujoyina, ngakho-ke sicela ukhululeke ukumema abangani bakho. Lesi yisikhathi sokufika nokuhamba; uma ungaya kuphela engxenyeni ye-webinar, wamukelekile ukujoyina nathi. I-webinar izokwenzeka nge-Zoom. Sicela uxhumane noMolly Rentscher, Umxhumanisi wohlelo lwe-IWCA Mentor Match Program, ngesixhumanisi se-Zoom: mrentscher@pacific.edu